आइतबारको दिन सूर्य भगवानको पूजा गर्दा शान्ति प्राप्त हुन्छ ! सेयर गरौ «
आइतबारको दिन सूर्य भगवानको पूजा गर्दा शान्ति प्राप्त हुन्छ ! सेयर गरौ
Published : 26 January, 2020 8:17 pm
आइतवारको दिन पीपलको पूजा र पीपलको फेदमा पानी हाल्ने काम गर्नुलाई पनि राम्रो मानिदैन भने यो दिन सहवास गर्नुलाई पनि पाप मानिन्छ ।
आइतबार तामा, सखर, रातो चन्दन, सूर्य महिमाको पुस्तक दान गर्न आवश्यक हुन्छ । यो दिन ब्रह्म मुहूर्तमा नुहाएर सूर्योदयको समयमा भगवान सूर्यलाई जलले मन्त्रसहित अर्घ दिँदा पुण्य कमिन्छ । आजको दिनमा सूर्य अर्घ्य मन्त्र–